Izinto eziluncedo nezingeloncedo xa pa parlour le ratio ukuguqulwa
トップページ ＞ 言語 ＞ コーサ語 ＞ Izinto eziluncedo nezingeloncedo xa pa parlour le ratio ukuguqulwa
Xa usiya fans neslothi, ndicinga kuqala ukuba umlinganiselo ukuguquka nexhala. Kuxhaphakile elibe pa, isixa kwebhola xa bayababoleka kubathengi, omnye ka-4 yen, iye yaba enye imbasa 20 yen. Kwiminyaka yakutshanje, Ichipachi no-5 yen slot, njalo-njalo, kodwa ke kwaphuma nokuba ibhola imali ephantsi, umlinganiselo ukuguqulelwa ngexesha eziinkozo ibhola kunye iimbasa ezikhutshwe Enoba kwenzeka ntoni na, baba yinto elungileyo ngesisa ezimiselwe pa parlour ngalinye unayo. Izinga imali
, yinto ebaluleke kakhulu ekumiseleni iinkqubo zokusebenza, nesendlu pa. E
, ezivenkileni eziphakamileyo-bakhupha kunye ezingoovimba ephantsi-nokutshintshwa, imodeli efakiweyo kwaye besilwela, njl, sifuna ukubona ukuba uhlobo umahluko apho. Njengoko umthengi, ndicinga kunjalo nabantu cash ephezulu nice, kukuba indawo yokudlala yakho kwi umlinganiselo ophezulu ukuguquka, kuba evenkileni, ngaphandle na ingqokelela senkululeko ayisekho.
ukusuka result ushishino oluqhelekileyo, isikhonkwane uba ngokuqinisa uthambekele, seto nawo crap zonke-1. Nokuba xa iziganeko, kukwavulwa nezikhonkwane ezinkulu phaya phezulu, senza kwakhona kube nzima ukuba ukwandisa isicwangciso esiphakathi, singasathethi isicwangciso eliphezulu. Pa onendawo-cash ophezulu, xa zingakhathaliyo kancinci, andikwazi umthi usizo kwangoko kuba intsilelo njalo.
Ngamafutshane, kuba kunzima kakhulu ukuya ukubonisa intlawulo, ukuba ukhangela kubathengi bethu, kwakunye ndicinga abaninzi ukuba babengayi kushiya Toka akabuyi. Ngoko, kwi pa parlour-cash eziphakamileyo, siye shop ukuba ngokukhethekileyo kumisa ezininzi imodeli ebizwa eliphezulu-zezirhubuluzi. Big hit kwenzeke liphezulu, utyalo-mali nayo kulindeleke isixa esikhulu semali.
Noko ke, naxa usibona kwicala umthengi, phezulu-zezirhubuluzi eliphezulu-nokutshintshwa ivenkile, kukhokelela win enkulu Ukuba ibhola. Pa onendawo of ngokuhlawulela ufikile phezulu, naye ukwandisa isixa mali kancinane, enyanisweni, yindlela kukuphumelela kungenzeka ukuba ephaphama phezulu kuwe. Kusekho, kukho inzuzo enkulu yemali phezulu. Ogqiba uyazi, ukuba hit, kukuba kubhetele ukulwa kuthi ga kwi pa parlour ngemali ophezulu.
vice versa, ivenkile ephantsi-nokutshintshwa, ngokuqhelekileyo Ukuba isikhonkwane yenziwa limnandi nabo, mhlawumbi okanye kukho iseti eliphakathi kwi slot. Ekubeni isantya uhola, ayanda amathuba bazobe hit enkulu. Noko ke, njengoko abaninzi intlawulo yokufumaneka, ngokuxhomekeke yokonga imali, nani yokuba kweWCED ezimbalwa. Xa imali ephantsi hlobo of pa parlour, umdlalo lula imodeli kutshiwoyo ukuba mnandi uhlobo specs ngemivo ophakathi, bakholisa ukuba ufake ezininzi ziya kuba ngaphezulu.
, ukuba into yokuba ufuna ukuzoba hit elikhulu, kodwa pa parlour kwemali ephantsi kucetyiswa, ndicinga ukuba kakhulu kunzima ukuphumelela enkulu. Evenkileni ngemali eziphakamileyo, nempumelelo enkulu kuthiwa umthengi waba nam incasa ukuhlangabezana, kwisitora ezisezantsi-nokutshintshwa, luphawulwa umnxeba umthengi wacela ukuba beve phakathi kwisincedisi ukudlala nto.
Ngale ndlela, ukuguqulwa ratio kubangelwe ngumahluko ukuba ukudlala ngayo, nina naye uthenga zatshintsha ukukhetha.
exchange alinganayo, isiseko esomeleleyo kunye uguqulelo umlinganiselo ophezulu engoovimba, obufanele kukuba sijolise kuphela isikhonkwane kuyo ixesha kakuhle. Ukuhlisa i ukuguqulwa ratio, kodwa lo mkhuba njengendlela yokugcina yonke, ezininzi njenge beziko eliphakathi, adla basiwa ukuba ukuba livila. Ixesha ayikho anisizakali kakhulu nangona ukubandezeleka, kuya kuba kufana - ukuba ndingade ndibe bytes wabasebenzi imini. Ngenxa umahluko kwicala ubuhle le, kananjalo oko kutshintshile kule venkile ukukhetha.
exchange alinganayo, isiseko esomeleleyo kunye uguqulelo umlinganiselo ophezulu engoovimba, obufanele kukuba sijolise kuphela isikhonkwane kuyo ixesha kakuhle. Ukuhlisa i ukuguqulwa ratio, kodwa lo mkhuba njengendlela yokugcina yonke, ezininzi njenge beziko eliphakathi, adla basiwa ukuba ukuba livila. Ixesha ayikho anisizakali kakhulu nangona ukubandezeleka, kuya kuba kufana - ukuba ndingade ndibe bytes wabasebenzi imini.